Nzira yekuwana sei vhezheni yeNVIDIA CUDA paLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Nzira yekuwana sei vhezheni yeNVIDIA CUDA paLinux?
Isaac | 23/10/2021 13:25 | Sisitimu Yekutonga, GNU / Linux
Iwe unogona kunge uine NVIDIA GPU uye uri kushandisa CUDA pane yako GNU / Linux distro. Uye iwe pamwe unodawo ziva iyo chaiyo vhezheni yeCUDA iyo yawakaisa pane yako system. Semuenzaniso, kuziva kana mamwe mabasa eiyi software aripo, kana kudzidza zvakawanda nezve API, kugarisana, zviripo zvigadziriso zviripo, nezvimwe.
Zvakanaka, izvi zvinogona kuva kuziva nekukurumidza uye nyore kubva kuCLI uye kune nzira dzinoverengeka dzekuita izvi, sezvauri kuona mune inotevera nhanho-ne-nhanho tutori:
Chekutanga pane zvese, yeuka kuti iwe unofanirwa kuve neino enderana NVIDIA kadhi yemifananidzo uye madhiraivha akaiswa muLinux, neCUDA toolkit futi. Kana zvisiri, iwe unogona kuisa iyo nvidia-cuda-toolkit package pane yako distro. Zvikasadaro hapana mune ino tutori inoshanda.
Imwe sarudzo ndeye kushandisa iyo nvidia-smi chishandiso paLinux yako, kuti uite izvi, tevera matanho aya:
Vhura iyo terminal.
Ita murairo «nvidia-smi" pasina quotation marks.
Mukubuda kwemurairo uyu, munzvimbo yemusoro kurudyi, iwe uchaona CUDA shanduro: Vv, apo Vv ichava shanduro.
Imwe nzira yekuzviita nayo concatenator:
Ita murairo unotevera «kati / usr/lib/cuda/version.txt" pasina quotation marks.
Mukubuda iwe uchaona shanduro yeCUDA.
Sezvauri kuona zviri nyore zviri nyore. Iye zvino iwe uchakwanisa kuziva iyo CUDA vhezheni pane yako Linux distro pasina matambudziko.
Rangarira kuti kana uine matambudziko kushandisa kana kuisa CUDA paLinux, unogona kuenda ku zvinyorwa yakapihwa neNVIDIA kune iyi sevhisi. Ikoko iwe uchaonawo runyoro rwe distros nerutsigiro rwekuzvarwa kweCUDA neshanduro, pamwe neruzivo rwese rwunodiwa nezve chishandiso, maitiro ekutarisa kana NVIDIA GPU yako ichienderana neCUDA kana kwete, prerequisites uye kutsamira, uye zvimwe zvakawanda. .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU / Linux » Sisitimu Yekutonga » Nzira yekuwana sei vhezheni yeNVIDIA CUDA paLinux?
inoita 1 mwedzi
mashoko akanaka thanks
SmashEx, kurwiswa kweIntel SGX kuburitsa data kana kuita kodhi
WINE 6.20 inosvitsa 398 shanduko uye inovhura nzira yeVanoburitswa Vanokwikwidza.